သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ | ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်ပြီး၊၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်၀က်ဘ်ဆိုဒ် လည်ပတ်ခြင်းတို့အား ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ (သို့)ကူဘိုတာမြန်မာ၏ကိုယ်စားလှယ်မှသာလျှင်ပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး စည်းကမ်းချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှု့ပါ။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စည်းကမ်းချက်များကို သ‌ဘောတူလက်ခံကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကူဘိုတာြမန်မာကုမ္ပဏီလိမီတက်သည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြုသည့် အခါတိုင်း ဤစာမျက်နှာရှိ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန် သင့်တွင်တာ၀န်ရှိပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ၏ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသူများ၊ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကူဘိုတာမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ၀က်ဘ်ဆိုက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားသင်၏လက်ခံမှုနှင့်သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြသည်ကိုသတိပြုပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြု‌‌‌နေစဉ်အတွင်း ‌အောက်ပါအချက်အလက်များကို မပြုလုပ်ရန်သဘောတူပါသည်။
မည်သည့်ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမဆို ချိုးဖောက်ခြင်း
၊ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သို့မဟုတ်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုခုအားဆိုးကျိုးများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သောလုပ်ရပ်များတွင်ပါ၀င်ပတ်သက်ခြင်း
၊အများပြည်သူဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်သောလုပ်ရပ်များတွင် ပါ၀င်ခြင်း
၊အများပြည်သူဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်သောလုပ်ရပ်များတွင်ပါ၀င်ခြင်း
၊ဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်(သို့)အချက်အလက်ဗွီဒီယိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဆာဗာများ၊ ကွန်ပျူတာများသို့ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက်နှင့်အခြား‌‌သောအဖွဲ့အစည်းများ၏ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်သည့်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်(သို့)အချက်အလက်များကိုတင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်း။
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများ၏တိကျမှု၊ အချိန်ကိုက်ရရှိနိုင်မှုကိုအာမမခံပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်တာ၀န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဆာဗာများ၏လုံခြုံမှုကိုအာမမခံပါ။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်မည်သည့် ဘေးအန္တရာယ်၊ အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများချို့ယွင်းပျက်စီးခြင်း၊ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များ၊ မလိုလားအပ်သောဖိုင်များ (သို့) အခြားအလားတူဆော့ဗ်ဝဲ (သို့) ဒေတာ၊ (သို့) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခြင်းများတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုမဆို တာ၀န် ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများကို ပြောင်းလဲလိုက ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ၀န်ဆောင်မှုများကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်တာ ၀န်ယူမည်မဟုတ်ပါ
ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အချို့သောဒေသများနှင့်နိုင်ငံများတွင်မရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ဒေသတိုင်းနှင့်နိုင်ငံတိုင်းတွင်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အမြဲတမ်းပုံစံမထားပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အသံများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများအတွက် မူပိုင်ခွင့်သည် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှပိုင်ဆိုင်ပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်််််််််််််််််််််််နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရာများအားလုံးကို မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုမှအပ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော မည်သည့်အချက်အလက်များကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲအသုံးပြုခြင်း၊ပုံတူပွားခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ တင်ခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ချေးငှားခြင်းမပြုလုပ်ရ။
ဤနေရာတွင်ပါရှိသောသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အကြောင်းအရာစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီရှိအခြားစာမျက်နှာများရှိအခြားမည်သည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအစားထိုးသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရရှိနိုင်သော ဆော့ (ဖ်) ဝဲ သည်သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မူပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စာချုပ်ပါပြဌာန်းချက်များအပြင်အခြားဆော့ဖ်ဝဲ၏ပိုင်ရှင်နှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသူအကြားနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အကျုံးဝင်သည်။
ကုမ္ပဏီအမည်များ၊ ထုတ်ကုန်အမည်များနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုထားသောအမှတ်တံဆိပ်များသည် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသောအခြားကုန်ပစ္စည်းအမည်များ၊ကုမ္ပဏီအမည်များသည် ကုန်သွယ်ရေးအမည်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောပြင်ပ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များ ("ချိတ်ထားသောဆိုက်များ") သည်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကသီးခြားလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိပေ။ ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက်ကိုအသုံးပြုရာတွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုက်တစ်ခုစီ၏အော်ပရေတာကသတ်မှတ်သောစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်မည်သည့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများအတွက်တာဝန်မရှိပါ။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်မည်သည့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာ‌‌‌သော မည်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုတာ၀န်မရှိပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် မှချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ်များတွင်ပါ၀င်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ပေးအပ်ထားသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ခံချက်နှင့် / သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းမပြုရ။ ဤနေရာတွင်ပါရှိသောမည်သည့်အရာကိုမျှချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုက်များနှင့် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် အကြားမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အလားတူဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဟုမှတ်ယူရမည်။
မှတ်ချက်များ၊ မေးခွန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အဆိုပြုချက်များ၊ အတွေးအခေါ်များစသည်တို့ကို ("မှတ်ချက်များ") ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို သင်သဘောတူထားသည်ဟုနားလည်မှတ်ယူမည်။
မှတ်ချက်များကိုစဉ်းစားရန်၊ အကဲဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်အတည်ပြုရန်အတွက်မည်သည့်တာ၀န်ကိုမဆို ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှမှတ်ချက်များနှင့်တစိတ်တပိုင်း သို့မဟုတ်တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တူညီသည်ဖြစ်စေမှတ်ချက်များကိုလက်ခံသည့်တိုင် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်တာ ၀န်ယူမှုမရှိသကဲ့သို့မည်သည့်လျော်ကြေးအတွက်မျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အသုံးပြုသူများကိုသတ်မှတ်ထားသောပုံစံအတွက်အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်စသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန် သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖြန့်‌‌ဝေခြင်း သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအတွက် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့မဟုတ် ၄ င်း၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုပါကအသုံးပြုမည်သို့မဟုတ်မျှဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသင့်တော်သောစာမျက်နှာမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ပဖွဲ့အစည်းများအားအောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင်ဖော်ပြနိုင်သည် -
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ဘ‌‌ရောင်ဇာ ဆက်တင် ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးသူတွေက cookies အားလုံးကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ် cookies ကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကသတ်မှတ်ချိန်တွင်သင်အသိပေးလိမ့်မည်။ တပ်ဆင်ခြင်းအသေးစိတ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဘရောင်ဇာ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies များကိုပိတ်ဆို့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
* Cookie ဆိုတာဖိုင်သေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ hard disk drive ထဲမှာဆိုက်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်လည်ပတ်ခြင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဝဗ်ဆာဗာသည်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်သည်ကိုခြေရာခံ။ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookie အသေးစိတ် (Google Analytics) အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ
Google ANALYTICS အား အသုံးပြုခြင်း
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Google ,Inc 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). မှပံ့ပိုးပေးသည့် Google Analytics ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဂူဂဲလ် Analytics သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုသည် ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ကူညီရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်၊ သင်လာသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သူတို့ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများအပါအဝင်၊ ဤအချက်အလက်သည် ဝဘ်ဆိုက်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်၀န်ဆောင်မှုများ တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။ စည်းကမ်းအရဆိုလျှင်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော ကွတ်ကီး မှထုတ်လုပ်သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကို မဆို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဆာဗာများပေါ်တွင်ဂူဂဲလ်မှကူးယူပြီးသိမ်းဆည်းပေးလိမ့်မည်။
၀က်ဘ်ဆိုဒ်၏အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများကိုစုစည်းရန်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြားစာရင်းအင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုကူညီရန်ဂူဂဲလ်သည် အချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်အသုံးပြုမည်။သင်၏ဂူဂဲလ် Analytics၏ မူဘောင်အတွင်းသင်၏ browser မှထုတ်လွှင့်သောအိုင်ပီလိပ်စာသည် ဂူဂဲလ်မှသိမ်းထားသော အခြားမည်သည့် အချက်အလက်နှင့်မျှ ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
ဤ၀ဘ်ဆိုဒ်သည်ဂူဂဲလ်မှပေးသောIP-anonymizationလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်၏IPaddressကိုUS သို့မပြောင်းမီဥရောပအီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ သို့မဟုတ်ဥရောပစီးပွားရေးဆိုင်ရာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအခြားကန်ထရိုက်စာချုပ်များပြည်နယ်များမှဂူဂဲလ်မှအတိုကောက်မှတ်သားပါလိမ့်မည်။ ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်သာသင်၏ IP လိပ်စာအပြည့်အစုံကို US ရှိ Google ဆာဗာသို့လွှဲပြောင်းပြီးထိုအချိန်တွင်အတိုကောက်မှတ်သားပါလိမ့်မည်။ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Browser-plugin ကိုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် Browser များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုပါက၊ Google Analytics မှရှာဖွေခြင်းကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အောက်ပါ opt-out link ကိုနှိပ်ပါ- Opt-out of Google Analytics Tracking: ဤကိစ္စတွင်GoogleAnalyticsမှဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သည့်ထပ်မံခြေရာခံခြင်းကိုတားဆီးပေးမည်။ သင်၏စက်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ကွတ်ကီးအားလုံးကိုဖျက်လိုက်လျှင်သင်ထပ်မံဖယ်ထုတ်ရမည်ကိုသတိရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ရန်သင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီတိုင်း Opt-out လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်၏ privacy ဆိုင်ရာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ကိုနှိပ်ပါ https://support.google.com/analytics/answer/6004245
ချိတ်ဆက်ထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ URL နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ကို ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုအကြောင်းကြားလျှင်မည်သည့် ၀က်ဆိုဒ် ကိုမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အောက်ပါတို့ကိုသင်သဘောတူရမည် -
ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် တာ၀န်ယူမှုနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို မယူမှတ်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသည် ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှမည်သည့်အခွင့်အရေးများပေးသည်ကိုမဖော်ပြပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၏ URL နှင့်ပါ ၀ င်မှုများကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကြားစာသို့မဟုတ်ပါ၀င်သောအရာများကိုဖျက်ခြင်းကိုမပေးပါ။
မည်သူတစ်တစဦးတစ်‌‌‌‌ယောက်ကိုမျှ Cross- လင့်များလုပ်‌ပေး‌လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တတိယပါတီအား ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာများသည် ကူဘိုတာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်နည်းဖြင့်သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုဂိုအား ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
အောက်ပါတို့ပါ၀င်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလင့်ခ်များကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်များတွင်လည်း ကိုးကား၍ မရပါ။
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် URL လင့် ချိတ်ဆက်လိုပါက ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ် ကိုအကြောင်းကြားလျှင်မည်သည့် website ကိုမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အောက်ပါတို့ကိုသင်သဘောတူရမည် -
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုများအတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။၀က်ဘ်ဆိုက်အားအသုံးပြုခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဂျပန်ဥပဒေများနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ရမည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများအားလုံးကိုအတိအကျဖော်ပြခြင်းမရှိပါကဂျပန်ရှိအိုဆာကာခရိုင်တရားရုံးသို့ပထမအကြိမ်တရားရုံးအဖြစ်တင်သွင်းရမည်။